Yan Aung: March 2008
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ.
ကျွန်တော် ဧပြီလဆန်းပိုင်း (သို့) ဒုတိယပတ်လောက် ကျမှပဲ ဘလော့ဂ်ဖက်ကို ပြန်လှည့်နိုင်ပါတော့မယ်. ခုတလော စာဖတ်စရာတွေ များနေတာရယ်၊ အလုပ်ကလည်း အချိန်ပြည့်လုပ်နေတာရယ်ကြောင့် စာမရေးနိုင် ဖြစ်နေပါတယ်.
အမြဲလာရောက် အားပေးဖတ်ရှုကြတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ် မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်များ အားလုံးကို အမြဲတမ်း နွေးထွေးပျူငှာစွာ ကြိုဆိုနေမြဲပါ…
“ဟင်း” ချလို့သာ မှိုင်ရတယ်…
အိုင်ချင်း ............. ရေခဲငှက်
ကျွန်တော် ဒီညနဲ့ မနက်ဖြန်မှာ ဘလော့ဂ်တစ်ချို့အတွက် EOT လုပ်ဖြစ်ပါမယ်. တကယ်လို့ EOT လုပ်ရတာ ခက်ခဲနေတဲ့သူတွေရှိရင် ဒီပို့စ်လေးရဲ့ ကော်မန့်မှာ ဘလော့ဂ်လိပ်စာလေးတွေ ထည့်ပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်. ထွက်လာတဲ့ ဖိုင်တွေကို ပြန်တင်ပေးပါမယ်. ကိုယ့်ဖာသာ တစ်နေရာရာမှာတော့ ပြန်ပြီး Hosting လုပ်ရမှာပေါ့ဗျာ. နော်.
အေးဆေးပေါ့. ပြောသင့်ပြောထိုက်တာကိုတော့ ပြောရမှာပဲလေ.
ဒါ မင်းသဘောပါ. ငါ့အမြင်ကတော့ မင်းပြောဖို့ အချိန်မရောက်သေးဘူးထင်တယ်.
ပြောဟေ့ ပြော… ဖြစ်လာမှ ငါ့ကို အဆိုးမဆိုနဲ့…
“ပြော” ဆိုသော စကားလုံးနေရာတွင် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ကြိယာများ အစားသွင်း၍ ပြန်လည်ဆန်းသစ်နိုင်ပါသည်. ဥပမာ. “စား”၊ “လုပ်”၊ “သွား” စသည်....
ဘာလို့ ငါ့ကို ဟောဒီ့နံရံ အနီရောင်ကြီးတွေနောက်ဖက်ထဲ ပို့ထားရတာလဲ.
ငါ့ကို လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်ခွင့်ပေးပါ.
ရက်စက်လိုက်ကြတာ. ငါ့အတွက် အိပ်စရာနေရာတောင် ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းမရှိ. စားစရာဆိုတော့လည်း သူကျွေးတာပဲ စားရတယ်. သူမစားရင် ငါမစားရတော့ဘူး. သူစားသမျှရဲ့ အကြွင်းအကျန်တွေကို ငါစားရတယ်.
ပြီးတော့ သူက ပြောသေးတယ်.
ဘာမှ လုပ်စရာ အထွေအထူးမရှိတော့လည်း အချိန်တော်တော်များများမှာ ငါအိပ်ပဲ နေခဲ့တယ်. ငါ နိုးနေတဲ့ အချိန်တွေမှာ တစ်ခါတစ်လေဆိုရင်ပေါ့. နံရံအပြင်ဖက် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ပြောနေကြတဲ့ အသံဗလံတစ်ချို့ ငါကြားကြားနေရတယ်. စကားသံလိုလို၊ ချော့မြှူသံလိုလို၊ ခြိမ်းချောက်သံလိုလို၊ တောင်းပန်တိုးလျှိုးသံလိုလို ဘာတွေမှန်း ငါမသိဘူး.
တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ငါသိပ်အားငယ်တာပဲ. ငါသိပ်ကြောက်တာပဲကွာ…
ငါ့ဘေးနားမှာ ဘယ်သူမှလည်း မရှိကြဘူး.
ငါ့ကို ထားတဲ့ အခန်းလေးကလည်း သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှု မရှိဘူး. အကျိအချွဲတွေနဲ့…
ငါ ဒီလိုအခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ နေခဲ့ဖူးပါတယ်. ခဏခဏပဲလို့ ထင်ပါတယ်.
နံရံနီကြီးတွေရဲ့ အပြင်ဖက်ကိုရောက်တော့လည်း ပြင်ပကမ္ဘာရဲ့ ဖြားယောင်းသွေးဆောင်မှုတွေ အောက်မှာ သာယာမိန်းမူးနေခဲ့ပြီး ဒီနံရံနီကြီးတွေ ပြန်ခေါ်မယ့်ရက်ကို ငါမေ့လျော့နေခဲ့တယ်.
မသိဘူးကွာ… လောလောဆယ် ငါဗိုက်ဆာတယ်. ငါ့ကို တစ်ခုခုကျွေးပါ..
ငါ့အသံတွေကို ခြစ်ကုတ်ပြီး အော်ပစ်လိုက်တယ်.
သူတို့တွေ ကြားဟန်မတူပါဘူးလေ… ငါ့ရှေ့က နံရံနီကြီးတွေကို ငါ့ခြေထောက်နဲ့ ကန်ပစ်လိုက်တယ်.
နိုးနိုး.. ဘာဖြစ်တာလဲ… ငါ့အခန်းတစ်ခုလုံး ဇောက်ထိုးမိုးမျှော်တွေ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်.
လာပြီ… အသံကြားနေရတယ်… တစ်စုံတစ်ခု ငါ့ဆီကိုချဉ်းကပ်လာနေခဲ့တယ်.
ငါနေတဲ့ အခန်းကျဉ်းလေးထဲကို စားစရာတစ်ချို့ ရောက်လာခဲ့တယ်. အငမ်းမရ ငါစားပြီးတော့ ပြန်အိပ်နေလိုက်တယ်.
လွတ်မြောက်ချင်ပြီကွာ… ဒီမှာဒီလိုချည်းပဲ စားလိုက်အိပ်လိုက်နဲ့ နေနေရတာ ငါပျင်းတယ်…
ငါ့ရဲ့ ဘ၀ဟာ ဘာလဲလို့ စဉ်းစားရလောက်အောင်လည်း ငါ့အသိဥာဏ်က မကြွယ်ဝသေးဘူးလေ.
အင်း. ဒီတစ်ခါ နံရံနီကြီးတွေ ငါ့ကို အပြင်ထွက်ခွင့်ပြုရင်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကိစ္စလေးတစ်ချို့ ငါလုပ်ကြည့်ရဦးမယ်. ဒါမှ ငါ့ကို ဒီနံရံနီကြီးတွေ ပြန်ခေါ်တဲ့တစ်နေ့၊ ဒီအခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ ငါ့ကို ထပ်မံ ချုပ်နှောင်ထားမယ့်နေ့ကျရင် ငါ့အတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ တစ်စုံတစ်ခု ရှိနေမှာပေါ့…
အချိန်တွေရယ် တရွေ့ရွေ့နဲ့ပေါ့…. ငါလည်း ဒီဘ၀ထဲက လွတ်မြောက်ချင်စိတ်တွေ သိပ်ပြင်းထန်လာနေခဲ့ပြီ… ငါ့ကိုယ်ငါ လုံလောက်တဲ့ ခွန်အားတွေ ရရှိလာပြီလို့ ငါယူဆတယ်.
ဟုတ်တယ်. ငါ လောကကြီးကို ပြန်လည်ရင်ဆိုင်မယ်.
ဒီလောကကြီးဟာ ငါ့အတွက်တော့ အစိမ်းသက်သက်တော့ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး. ဒီလောကကြီးထဲမှာ ငါကျင်လည်နေခဲ့ဖူးတာပဲ. ခဏတော့ နေသားကျအောင် ပြန်ညှိယူရမှာပေါ့. ငါက ဒီလောကကြီးနဲ့ ခေတ္တကင်းကွာနေခဲ့တာကိုး…
၀င်လာတဲ့ လေအေးကို အငမ်းမရ ငါရှုရှိုက်လိုက်တယ်.
အင်အားတစ်ချို့ ရလိုက်သလို၊ သဘာဝရဲ့ စေ့ဆော်မှုတစ်ခုခုကို ငါခံစားမိလိုက်သလို ဖြစ်သွားခဲ့တယ်.
ဟုတ်တယ်… ဒါဟာ ငါ့အတွက် အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲ. ငါရုန်းထွက်ဖို့ အချိန်ကျရောက်လာပြီ.
ငါ့ခေါင်းပေါ်က ထွက်ပေါက်လေးကို မော့ကြည့်လိုက်တယ်.
မေတ္တာပြည့်လျှမ်းတဲ့ ကြင်နာတဲ့ ခေါ်သံတစ်ခုကို ငါကြားလိုက်ရတယ်. အားတက်သွားတာပဲ…
ငါ့တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ရှိနေတဲ့ ခွန်အားတွေကို စုစည်းလို့ ငါ့ခြေထောက်အောက်က နံရံနီကြီးကို အားနဲ့ ကန်ကျောက်ပစ်လိုက်တယ်.
၀မ်းနည်းပူဆွေးသံလိုလို၊ နာကျင်ခံစားခက်တဲ့ ဝေဒနာတစ်ခုခုကို ခံစားနေသလိုလို ထူးဆန်းတဲ့ အသံတစ်ခု ငါကြားလိုက်ရတယ်.
မဖြစ်ဘူး.. ဒီအခန်းထဲက ငါအမြန်ရုန်းထွက်ရမယ်..
မဖြစ်တော့ဘူး. ဒီတစ်ခါ အခန်းအပြင်ကိုရောက်ရင် ဒီနေရာကို ငါထပ်မလာအောင် ငါ့ကိုယ်ငါ စည်းကမ်းတင်းကြပ်မှုတွေ လုပ်ရမယ်. လေ့လာသင့်တာတွေကို လေ့လာရမယ်. ပြုပြင်ပြောင်းလဲသင့်တွေကို ပြောင်းလဲရမယ်၊ ပြုပြင်ရမယ်.
ဟုတ်တယ်. ငါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပစ်ထားလို့ မရဘူး. ထိန်းချုပ်ရမယ်.
ဒါမှ ငါ့ကို ဒီနံရံနီတွေနောက် သူတို့ ထပ်မပို့နိုင်မှာ…
ငါ့ကို သူတို့ ပေးမထွက်ကြဘူး… နံရံနီကြီးတွေ ငါ့မျက်နှာနားကို တိုးကပ်လာကြတယ်.
ငါ့ခြေထောက်အောက်က ကြမ်းခင်းအနီရောင်ကြီးလည်း ကြွတက်လာသလို ခံစားလာရတယ်.
ငါ့ကို ဆွဲငင်နေတာလား၊ တွန်းထုတ်နေတာလား…
လောလောဆယ် ငါအပြင်ကို အမြန်ထွက်ချင်တယ်.
လေကောင်းလေသန့်ကို ငါငတ်မွတ်နေခဲ့တာ ကြာပြီ…
ကျေးဇူးပြု၍ ငါ့ကို လွတ်မြောက်ရာသုိ့ ကယ်တင်ပါ.
အေးလေ. ငါက အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ အချိန်အကြာကြီးနေခဲ့ရတာကိုး. ဒီလိုအလင်းရောင်နဲ့ မထိတွေ့ရတာ ကြာပေါ့..
ငါ့ကို ပွေ့ချီသွားတာ ခံစားလိုက်ရတယ်.
နူးညံ့တဲ့ မေတ္တာရှင်၊ စာနာတတ်တဲ့ ကရုဏာရှင်၊ ကြင်နာတတ်တဲ့ ကိုယ်ပွားတစ်ခုလို့ ငါယုံကြည်လိုက်တယ်…
ငါ့အတွေး မဆုံးခင်မှာပဲ ငါလုံးဝထင်မထားတဲ့ အပြုအမူတစ်ခုကို သူရက်ရက်စက်စက် လုပ်လိုက်ခဲ့တယ်.
တစ်စုံတစ်ရနဲ့ ငါ့တင်ပါးကို ဖြောင်းခနဲမြည်အောင် ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်လေ…
ငါလည်း နာကျည်းခံစားချက်တွေနဲ့ အသံကုန်ညှစ်ထုတ်ပြီး အော်ပစ်လိုက်တယ်….
ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် မပိုင်ပြီပဲ ခင်…
ကြာလာရင် ရူးမယ် မတွေးနဲ့
အို ပျော်ရွှင်ခြင်းများ တကယ် နီးနီးလေး ရှိလျက်နဲ့
၀င်လာမယ် ၀မ်းနည်းမှုတွေ မျှော်မနေလည်း ကြုံမယ်
ဝေဒနာ အလွမ်းအဆွေးများဆိုတာ ပျော်စရာတွေ ခိုးယူသွား
ကဲ ငိုမနေနဲ့တော့ အရေးမကြီးသလို ထားလိုက်
အခက်အခဲတွေ မေ့လိုက်ကြာလာရင် ရူးမယ် မတွေးနဲ့
အရှုံ့းတွေကို သတိရ နေမလား
တစ်ခါ ငိုချင်တိုင်း ငါ မင်းရဲ့ အနားမှာ
ငါမင်းရဲ့ အနားမှာ အတူတူ ရှိနေမှာ
လူဟာ လိုအပ်ခြင်းနဲ့ အမြဲတမ်း ရှိနေမယ်
ကိုယ်သဘောတစ်ခုတည်းနဲ့ ညီချင်လည်း ညီမယ်
အရှုံးတွေကို သတိရ နေမလား
Special Credits goes to Winkabar for this song and lyrics.
iPhone ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ Unlock လုပ်ချင်သူများအတွက်
ဒီတစ်ခါတော့ နောက်ဆုံးပေါ် Gadgets လေးတွေကို fancy ဖြစ်သူများ၊ ကလိချင်သူများအတွက် အသုံးဝင်မယ့် source လေးတစ်ခု မျှဝေချင်ပါတယ်.
iPhone ကို Unlock လုပ်နည်းပါ.
အဆင့်မြင့်တဲ့ User Interface
အရင်တုန်းကဆိုရင် နောက်ပေါ်တဲ့ iPhone တွေကို Unlock လုပ်မရအောင် လုပ်ထားတတ်ပါတယ်. အခုတော့ ဟက်ကာတွေရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ ပူးပေါင်းကြံဆမှု တို့ကြောင့် ဘယ် iPhone အမျိုးအစားကိုမဆို အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ Unlock လုပ်နိုင်ပါပြီ.
This application will jailbreak, unlock and activate any version of iPhone extremely fast and easy!
ကဲ. ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ကြိုးစားပြီး Unlock လုပ်နိုင်ဖို့ ဒီနေရာလေးကို သွားပြီး လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါကြောင်း….
မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် Fulbright ပညာတော်သင်ဆု အခွင့်အရေး
သူဘယ်ကိုလွင့်သွားမလဲ လိုက်လွင့်လို့ သွားချင်လည်း
သူဘယ်မှာ ခိုနားမလဲ လိုက်လွင့်လို့ နားချင်လည်း